Timo jarista Wiilasha Casriga ah | Ragga Stylish
Timo jarista ragga casriga ah
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, Timaha
Waxaan jecel nahay inaan ogaano waxa timaha loo jaangooyo, maxaa yeelay waxaan dooneynaa inaan ogaano waxa ugu muuqda uguna dambeeyay moodada. Dhammaan raggaas casriga ah ee jecel inay qurxiyaan timahan timaha ayaa ah kuwa ugu casrisan isla markaana abuura muuqaalkaas hadda jira.
Haddii sheygaagu yahay inaad xirato timo gaagaaban, waxaan ku tusi doonnaa qaababka ugu fiican waxaanan ku siinaynaa shakhsiyaddaas ama isbeddelka aad u baahan tahay. Waan ognahay in siinta fikirka ugu fiican had iyo jeer ay wanaagsan tahay in wax yar oo ka mid ah caqligaaga loo hibeeyo oo la ogaado waa maxay nooca goynta uu u baahan yahay qaabka wajigaagu.
1 Timo jare wiil casri ah
1.1 Nadiifi oo nadiifi goynta
1.2 Timo qasan
1.4 Macbadka Fade
1.5 Dhimasho Yar ama Mid Fade
1.6 Afro Fade
1.7 Timo jar timo jilicsan
Timo jare wiil casri ah
Xilli kasta waxaan leenahay qaabab kala duwan iyo timo jaris la jaan qaadi kara shakhsiyaddayada. Waa inaan sameynaa xulashada ugufiican oo aan ogaano midka ugu haboon. Noocyada noocan ah ee timo jarista waa kuwo casri ah oo sidaas u sii socda oo xitaa waxay leeyihiin magacyo u gaar ah:
Nadiifi oo nadiifi goynta
Inta badan googoynimadu wali waa fasal oo waa inaynaan ilaawin in waxa ugu fiican ay yihiin had iyo jeer kan bixiya muuqaalkaas nadiifta ah. Joogitaanka caadiga ah ee dhinaca kala goysku weli waa kuwa ugu badan ee la isticmaalo, waxay yeelan karaan dherer timo gaaban ama dheer, had iyo jeerna nadiif ah oo dhinaca u shanlee.
Waa muuqaalkaas la jiid-jiiday iyo waalan ee inaga dhigaya caasi iyo casriye. Waa dhiirrigelin weyn maxaa yeelay waxay jeceshahay inay ka dhigto mid hadda taagan, laakiin waa inaanan ilaawin inaad adiguna xiran karto disheel iyo habeyn. Haddii aad taqaanid sida loo qaado sumaddan, waxaad had iyo jeer qeexi doontaa sida looga dhigo inay calaamadeyso shakhsiyaddaada.
Waa eraygaas aan maanta adeegsanno iyo midkaas runti waa runti timaha guridda Qaababka timahaani waxay ku habboon yihiin si wanaagsan oo loo qurxiyey, garka dhaadheer. Hipster cut cut waxaa lagu gartaa inuu yahay mid si cad loo xiiray dhinacyada iyo xagga dambe, iyo timo dheer oo xagga dambe ah.
Waxaa lagu gartaa inay tahay timo gaaban oo caddaalad ah dhinacyada madaxa iyo xagga dambe, sidoo kale haddaad si dhow u fiirsato looma baahna in la hagaajiyo qaybta macbudka maxaa yeelay gubashadoodu dhinac ma taalo. Dusha sare ayaa loo qaabeyn karaa habka aad doorbideyso oo had iyo jeerna si go'an xarrago leh.
Dhimasho Yar ama Mid Fade
Waa laba timo oo aad isugu eg, gudaha Low Fade waxaan heleynaa timo jaris aad u casri ah, Qaybta kore oo loogu talagalay inay yeelato timo yar oo dhaadheer oo markay jartu hoos u dhacdo, si tartiib tartiib ah ayey u yaraaneysaa illaa ay qoorta gaarto.
Iyada oo la jaro Mid Fade waxaan ka helnaa nooc isku mid ah timo, laakiin hoos u dhaca goyntaadu waxay ka bilaabmaysaa badhtanka madaxa. Waxay umuuqan doontaa timo jaris aan caadi aheyn laakiin waxay umuuqataa mid quruxsan oo qurux badan.
Ragga oo aad u timo timo badan waxaad heli kartaa timo jar jaban oo aad u qabow markaa waad baran kartaa timahaas si aad u wanaagsan. Waa qaab isku dhafan oo ku dhow dhammaan noocyada kala-goynta ee la qaadayo. Qaabkeeda waxaa lagu gaaraa iyadoo looga tago qaybta kore xoogaa dheer dhinac walbana aad loo xiiray, xitaa sameynta tafaasiil yar oo leh qaabab ama xariijimo mandiil ah.
Timo jar timo jilicsan
Timaha timaha ayaa si weyn loogu xiraa dhalinyarada, sida waxay maareeyaan inay ka tagaan dhammaan qaybta curly ee madaxa sare leh timo xoogaa dheer ah (qaabka loo yaqaan 'hipster style') iyo dhinacyadu si aad u wanaagsan ayaa loo jarjaray oo dherer ahaan hoos loo dhigay. Haddii aadan haysan timo jilicsan oo aad rabto inaad ku guuleysato, waxaad ku sameyn kartaa adiga oo helaya perm.
Ma xasuusataa timaha caanka ah ee Elvis Presley? Hagaag qaabkiisu waa fanaanka caanka ah ee uu xidho xaga sare madaxa super dib u shanlay. Qaabkeedu wuxuu soo ifbaxay 80-meeyadii laakiin qaabka hipster-ka ah kuna jiheeya Pompadour-kan wuxuu noqon doonaa timo aad u casri ah.
Goyntaani waa mid ka mid ah kuwa ugu xag-jirka ah, ficil ahaan dhererka timuhu ma jiraan maxaa yeelay waxay ku dhowdahay inay timaha xiirto. Timaha ayaa in yar uun ka hadhsan madaxa korkiisa oo sidaad u aragtoba waa timo jar aad u qabow. Waa wax timo la taaban karo ah maxaa yeelay waxaa macquul ah in la xiro timo aan waqti dheer qaadan in taxaddar weyn la sameeyo.
Si aad wax badan uga ogaato waxaad ka ogaan kartaa noocyada timaha gaaban ee ragga waxaad geli kartaa qeybtayada timaha loogu talagalay qaabkan. Haddii halkii aad rabto inaad xirto timo dhaadheer waana ku caajisaysaa inaadan aqoon sida loo xidho, waxaan sidoo kale leenahay timaha ugu fiican ee lagu yaqaanno sida loo xidho. timo gaagaaban, firidhsan oo casri ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha » Timo jarista ragga casriga ah
Qoyaanka ugu fiican ragga